नेपालकै अ’नौठो मन्दिर हेर्नुहोस, बत्ती बालेर सन्तानको बरदान दिने, मागेका सबै कुरा पुरा हुने विश्वास पूरा पढ्नुहोस्… – Ramailo Sandesh
लमजुङ जिल्लाको मध्य नेपाल नगरपालिकामा एउटा शिव मन्दिर छ । इशानेश्वर महादेव मन्दिर । उक्त ठाउँमा शिवरात्रीमा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ ।
सो मन्दिरलाई सन्तानेश्वर महादेव पनि भन्ने गरिन्छ ।नेपालमा इशानेश्वर एक मात्र यस्तो मन्दिर हो जहाँ रातभरी उठेर ठाडाबत्ती बाल्यो भने सन्तान प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । मन्दिरका पुजारी गोविन्द सोतीले मन्दिरमा आएर बत्ती बाल्नेहरुले सन्तान प्राप्त गरेको बताएका छन् ।
तर निकै लामो समय देखि मन्दिरमा ठाडा बत्ती बाल्ने प्रचलन रहेको भन्दै उनले अहिलेसम्म कति जनाले बत्ती बाले भन्ने तथ्यांक नभएको उल्लेख गरेका छन् । इशानेश्वर महादेव क्षेत्र विकास समितिले अहिले भने ठाडाबत्ती बालेर जन्मेका सन्तानको तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेको छ ।यो पनि पढ्नु होस:-अति नै मार्मिक कथा मन थामेर नरोई पढ्नुहोला ! अरुलाई पनि पढ्ने मौका दिनुहोला एक सुन्दर जोडि थिए ! केटा र केटि धेरै बर्ष माया प्रेम बसे पछि विवाह गर्छन , विवाह पछि त झन माया प्रेम पनि धेरै बड्दै जान्छ,दुबै जना धेरै नै खुशि र एक सुखि परिवारका साथ रमाउदै जिवन निर्वाह गरि रहेका हुन्छन। बिहान बेलुका श्रीमती पुजा पाठ गर्न गरेर सधै आफ्नो पतिको लामो आयु होश भनि भगवानसग प्रार्थना गर्थिन।
विनियमदरमा एकरुपता कायम गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
सर्वोच्चले यस्तो आदश दिएपछिओलीले नियुक्ति गरेका २० मन्त्रीको पद खुस्कियो, राजेन्द्र महतो सहित यी मन्त्रीहरु पदमुक्त